Suurtagal ma tahay in saddex bilood lagu xiro xeryaha Dhadhaab - BBC Somali
Suurtagal ma tahay in saddex bilood lagu xiro xeryaha Dhadhaab
12 Abriil 2015
Usbuuc kaddib markii xarakada Al-shabaab ay weerar ku qaaday jaamacadda Gariisa oo ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof ayaa dowladda Kenya waxa ay wakhti kama dambays ah u qabatay hay'adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga in ay ku xirto xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee Dhadhaab.
Dhadhaab oo hooy u ah in kabadan saddex boqol oo kun oo qoxooti Soomaali ah ayaa waxaa ay siyaasiinta qaar ku eedeeyeen in lagu tababaro dagaalyanada Al-Shabaab, eedeymahaasi oo Qaramada Midoobey ay si weyn u beenisay.
Hadaba hadalkan ka soo yeeray dowladda Kenya sharciyan ma waafaqsan yahay qanuunka caalamiga ah ee qaxootiga dunida? Cabdiraxman Maxamed Cumar (Cabdiraxman Goobe) waa khabiir wax ka yaqaana arrimaha qaxootiga, muDdo dheerna la soo shaqeeyey hay'ado caalami ah.
Xasan Cali Geele ayuu uga waramayaa sida amarkani kenya ka soo baxay loo waafijin karo nidaamka caalamiga ee qaxootiga.